संम्बन्ध विच्छेद गरिसकेका पूर्व पतिसंग फेरी माया बस्यो, अब म के गरौं ? – Etajakhabar
छलफल गर्दा कुनै न कुनै निष्कर्ष अवश्य निस्कन्छ। निस्कन नसके तपाईंले यस्ता पश्चातापबाट बच्न मनोविद्हरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। करूणा कुँवर, मनोविद्यो उत्तर कानुनी वा अन्य पक्षभन्दा मनोवैज्ञानिक पक्षमा मात्र केन्द्रित छ ।यो सामाग्री पाठक बर्गका लागि साप्ताहिक पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो । सामाजिक संजालबाट प्राप्त सामाग्री हो ! source -gorkhalikhabar
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ २४, २०७५ समय: ५:३३:२९